လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ…ဘာခက်တာမှတ်လို့…. အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ…ဘာခက်တာမှတ်လို့…. အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
Posted by ဇောက် ထိုး on May 26, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
မရှိတာထက်…မသိတာက ခက်တယ်။ မသိတာထက်..မသိချင်တာက ပိုခက် တယ်။ မသိချင်တာထက် …သိချင်ယောင်ဆောင်သူက အခက်ဆုံးတဲ့။ အကြံပေးအရာရှိဆိုသူကတော့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ…။
မီးကိစ္စအဆင်ပြေအောင်..ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်လေးထွန်းပြီး မီးပိတ် နေလိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့…ကဲဟုတ်ဘူးလား….ဘာခက်လဲ။ နောက် မိုးရွာတော့မှာမို့ မကြာခင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာတဲ့။ ဒါလဲ ဟုတ်ဘူးလား…. သိပ်မကြာခင်ပါဆို…..ဒါလေးမှ မစောင့်နိုင်ကြဘူးလား။ မသကာ….လေးငါးနှစ်ပေါ့။။။။ ဟီး စတာ..အဲဒီ စကားတွေကတော့ မကောင်းပါဘူး။ မစဉ်းစားပဲ ပြောလိုက်သလိုလဲ ဖြစ်သွားတယ်။ နောက်ကချော်ကချက်ပြောင် လိုက်သလိုလဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ မမှားသောရှေ့နေ..မသေသော ဆေးသမားမရှိဆိုသလိုပေါ့။ တခါမှားတာကို အပြစ်တွေအများကြီးပွားနေကြမယ်ဆိုရင်လဲ “အာဃာတတွေပွားနေရင်..အာဃာတတွေပဲ များမှာပဲ။ မကောင်းတာတွေ များတာဟာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး”
ပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လဲ…သမ္မတကြီးရဲ့အကြံပေးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အသိကြီးဖို့..သဘောထားကြီးဖို့…အမျှော်အမြင်ကြီးဖို တွေလိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်မှားတာကို မှားမှန်းသိရင်…လူတော်ပါပဲ။ မှားတာကို မှားပါတယ်လို့ဝန်ခံရဲတာကလဲ သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကြောင့် သမ္မတကြီးရော နိုင်ငံတော်ရော မထိခိုင်အောင်..ပြည်သူကို တောင်ပန်လိုက်ရင် ကောင်းမှာလို့မြင်မိပါတယ်။
နောက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲ…မီးမရလို့ လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတယ်လို့ မြင်ပြီး ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုတာလဲ တောင်းဆိုကြပေါ့။ ဒါ လူ့အခွင့် အရေး ပဲ။တောင်းဆိုရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မလွန်စေချင်ဘူး။ တပတ်တခါလို…နှစ်ပတ်တခါလို..အေးအေးဆေးဆေးလေး အုပ်ချုပ်သူကို သတိရစေရုံလေး တောင်းဆိုကြရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူတွေကလဲ..ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူတွေကို ဖမ်းဆီးတာ ငေါက်တာ ချုပ်တာ ရိုက်နှက်တာတွေ မလုပ်ပဲ.. အေးအေးဆေးဆေး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘူးဆိုရင် စိတ်ရှည်လက်ရှည် လေးသည်းခံပြီး ဆန္ဒပြသူတွေကိုပင် စောက်ရှောက်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါမှ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမေတ္တာတွေပွားလာမှာပါ။ ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေထဲမှာ ဆဲသူတွေ ဆူသူတွေ ဖျက်ဆီးသူတွေ ပါလာခဲ့ပြီဆိုရင်လဲ အုပ်ချုပ်သူတွေ အနေနဲ့က ဆန္ဒပြသူတွေကို အေးအေးဆေးဆေးပြစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ အဲဒီ ဆဲ ဆို..ဖျက်ဆီးသူတွေကို ခေတ္တခဏ ထိမ်းထားတာမျိုးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြလို့ ဖမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ..ဆန္ဒပြသူတွေကို လမ်းမှာရောက်မသွားစေဖို့ အနှောက် အယှက်မဖြစ်စေဖို့ ကူညီတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပဲ ဖြစ်စေရမှာပါ။ အဲဒီလို ပြည်သူနဲ့ အုပ်ချုပ်သူ ကြည်ဖြူပြီး ကူညီကြမှသာ မေတ္တာတွေပွားလာကြမယ်။ မေတ္တာတွေပွားမှ မေတ္တာတွေ များလာမယ်။ ယုံကြည်မှုတွေ ရှိလာမယ်။ ယုံကြည်မှုတွေ ရှိလာပြီး..တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ယုံကြည်မှုတွေခိုင်မာ လာပြီဆိုရင် တော့ အောင်မြင်တော့တာပါပဲ။
အဲဒီလိုမဟုတ်ကြပဲ..နေ့စဉ်ဆန္ဒပြတောင်ဆိုကြမယ်ဆိုရင် အလုပ်ပျက်တာ တွေ..လူပမ်းတာတွေ..ဒီအထဲမှာ ထိမ်းမရတာတွေ…အဖျက်သမား ဂျလေဘီမျိုးတွေဝင်လာကြမယ်….ဆူပူမှုတွေဖြစ်လာကြရင် စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေ အထားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုလဲ…စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်မျိုးနဲ့….အခါခါ သေခဲ့ဖူးတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ပျဉ်ဖိုးတော့ နာလည်ရုံမကဘဲ..ပါမောက္ခဆရာကြီးတောင်ဖြစ်နေသင့်ပြီဆိုတာ မမေ့ကြစေ လိုပါ။
အုပ်ချုပ်သူတွေကလဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကို ဆန္ဒပြသူတွေကို သားသမီးတွေလို သဘောထားပြီး စောက်ရှောက်ပေးကြပါ။ လိုအပ်တာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အမြန်ဆုံး ဖြည့် ဆည်းပေးကြပါ။ မပြည့်သေးသမျှကာလပတ်လုံး ဖြည့်နေပါတယ် ဆိုတာ တွေကို နေ့စဉ်ပြောဆိုပြီး ကျေနပ်အောင် ထင်သာမြင်သာ ရှင်းပြနေစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…. ကျွန်တော်အဖြစ်စေချင်ဆုံးကတော့ ဆင်းရဲ ချင် ဆင်းရဲပါစေ… အုပ်ချုပ်သူနဲ့ အုပ်ချုပ်ခံသူ ကြည်ဖြူစွာနဲ့…..တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလက် တွဲပြီး အခက်အခဲကို ကျော်လွှားနေတာတွေကိုမြင်ချင်ပါကြောင်း…
မီးလိုချင်သူ…ပြည်သူတွေကလဲ..မီးရချင်တဲ့စိတ်…မီးအပေါ်မှာ အုပ်ချုပ်သူတွေ သတိထားလာစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့..ကိုယ့်ကိုရော…ပတ်ဝန်းကျင် ကိုရော..အနှောက်အယှက် အထိအခိုက်မရှိအောင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုကြပါ။ (အညိုးတွေ အာဃာတတွေ အမုန်းတွေ..နဲ့ဆန္ဒမပြကြပါနဲ့)
အုပ်ချုပ်သူတွေကလဲ…ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေ မပျက်စီးအောင်….ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသူတွေ..အေးအေးဆေးဆေးပြရအောင်…..ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်အောင် စောက်ရှောက်မှုပေးလို့…ပြည့်သူ့မေတ္တာ….ပြည်သူ့ယုံကြည်မှုကို ရရှိအောင် စောက်ရှောက် ထိမ်းသိမ်းပေးလိုက်ကြပါလို့…
ဘယ်လိုပဲ ဆိုးတဲ့အရာဖြစ်ပါစေ…အဲဒီဆိုးတဲ့အထဲမှာ ကောင်းတဲ့အရာဆိုတာလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ မြင်အောင်ကြည့်တတ်ကြဖို့….နဲ့…ရအောင်ဆွဲထုတ်တတ်ကြဖို့ပါပဲ။ ဆန္ဒပြတဲ့ အရှိန်ကြီး တနိုင်ငံလုံးလို..ပျံ့နှံ့ပြီးလာလို့ အရှိန်ကိုထိမ်းမရဖြစ်ခဲ့ ရင် …ကောင်းမလား…ဆိုးမလား..တော့ မစဉ်းစားတတ်သေးဘူး။ ဘယ်အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အရှိန်ဆိုတာတော့ ရှိတယ်။ အရှိန်လေးနဲ့ မောင်းနေရင်..သက်သာသလို အဆင်ပြေသလိုရှိပေမယ့်လဲ….အရှိန်မထိမ်း နိုင်ပြန်ရင်လဲ…အန္တရာယ်မကင်းဘူးဆိုတာလေးကိုတော့ဖြင့် ။သတိ ဆိုတာ ပိုတယ်မရှိဘူးလို့တော့ ပြောတာပဲ။
ဦးပေနဲ့ဦးဗိုက် ဟုတ်ပါတယ်နော်။ မှားရင်လဲ ပြင်ပေါ့ဗျာ။ ငတ်လို့ မဟုတ်ပေမယ့် တတ်လို့လဲတော့ သိပ်မဟုတ်ပါဘူး။
မခံစားနိုင်လို့ ဆန္ဒပြကြတာ သဘာဝကျပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချိန်အတိုင်းတာ တစ်ခုအတွင်း မိမိဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြလို့
သက်ဆိုင်ရာတွေသိသွားရင် About ဇောက် ထိုး ပြောသလို အရှိန်တော့ထိန်းသင့်တာပေ့ါ။
ဆန္ဒပြမှု့ကအချိန်ကြာရင် မလိုလားအပ်တဲ့ပြသနာတွေ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
(ဒီအထဲမှာ ထိမ်းမရတာတွေ…အဖျက်သမား ဂျလေဘီမျိုးတွေဝင်လာကြမယ်….ဆူပူမှုတွေဖြစ်လာကြရင် )
ဒီလူမျိုးကလဲ မီးမွှေးပြီးရင် ပစ်ထားခဲ့ဘို့ တတ်တာပဲ
တိုင်းပြည်ထက် ရာထူး စည်းစိမ်ကို ပိုချစ်သူတွေလက်က တနေ့လွတ်မြောက်ရင်လဲ
တိုင်းပြည်ထက် ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ့်နာမည်ကို ပိုချစ်တဲ့သူတွေ လက်ထဲမှာ ကြာဦးမှာလား ???…။
ဦးပါရေ ကြာလေလေ ခိုင်မြဲလေလေ ဆိုရင်တော့
အူးဘဇင်း ကိုကိုဇောက်(ဦးပဉ္ဖင်းလိုလို လူလိုလို မိုလို့ ) ခင်ဗျ
သမဒအကျန်ပေး အူးကိုကိုလှိုင်အနေနဲ့ပြီးစလွယ် မပြောသင့်ဘူးဗျ
အဲဒလို ဖြစ်ကတတ်ဆန်းပြောထလိုက်တာ ပြည်သူတွေရဲ့ မီးမလာဒေါ်သကို ဆွပေးလိုက်သို ဖြစ်တယ်ဗျ
ဖယောင်းတိုင်ထွန်း တံခါးပိတ်ပြီး အိမ်ထဲဝင်နေလိုက် ပြောမဲ့အစား အမြန်အဆင်ပြေအောင် ဘယ်ကဲ့သို့တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးပါ့မယ်ဆို တော်သေးသပေါ့နော..
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လဲ ဆန္ဒပြတာ မကောင်းသလိုလိုနဲ့ဂယ်တော့လဲ ကောင်းနေပြန်ကောဗျ(အထင်ကိုပြောဒါ)
တော်တော်အရစ်ရှည်တဲ့ ပြည်သူတွေကိုလန့် ပြီး နောင်နှစ်တွေ မိုးခေါင်းရေရှားလို့မီးအပြည့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိရဲတော့မှာကိုးဗျ..
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာကို သိအောင် ဆန္ဒကတော့ ပြရမှာပဲလေး..တစ်ခုရှိတာက အခုအခြေအနေဟာ ဖြစ်ချင်တာမရမချင်း ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင်တော့ ဖယောင်းတိုင်ဘိုးနဲ့မွဲသွားလိ့မ်မပေါ့ဗျား
ဘိုးသန်းရွှေလက်ထက်ကလိုဆိုရင် အကုန် သေနတ်ဒင်စာ မိမှာ ကျိန်းသေဒယ်
ပြည်က ခြောက်ယောက်တော့ အာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးထားတယ်ကြားတယ်..ဗျ
ကျုပ်တို့ ဆန္ဒတွေ အချိန်မီ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြပါစေလို့ ဘဲ..
ဒါပေါ့..ဒါပေါ့
“”အဲဒီလိုမဟုတ်ကြပဲ..နေ့စဉ်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြမယ်ဆိုရင် အလုပ်ပျက်တာ တွေ..လူပမ်းတာတွေ..
ဒီအထဲမှာ ထိမ်းမရတာတွေ…အဖျက်သမား ဂျလေဘီမျိုးတွေဝင်လာကြမယ်….ဆူပူမှုတွေဖြစ်လာကြရင်
စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေ အထားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုလဲ…စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်မျိုးနဲ့…
.အခါခါ သေခဲ့ဖူးတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ပျဉ်ဖိုးတော့ နာလည်ရုံမကဘဲ..ပါမောက္ခဆရာကြီးတောင်ဖြစ်နေ
သင့်ပြီဆိုတာ မမေ့ကြစေ လိုပါ။””
ဒါကတော့ အမှန်ပါဘဲဗျာ။ကျနော် သဘောကျလို့ ကူးယူပြန်မန့် လိုက်ပါတယ်။
ကျုပ်ကတော့ ဦးကိုကိုလှိုင် ပြောခဲ့တဲ့ စကားကို သံသယ အကြီးအကျယ် ဖြစ်မိတယ် ။
လူတစ်ယောက်ဟာ မမှားရဘူး မဟုတ်ပါဘူး ။ သူ့ လိုမျိုး သမ္မတအကြံပေး တစ်ယောက်ဟာ ဒီစကားမျိုးကို လွယ်လွယ်ကူကူ လက်လွတ်စပယ် ပြောတာဟာ ထူးဆန်းလွန်းမနေဘူးလား ဦးဘဇင်း နဲ့ စာဖတ်သူ ဆြာ တို့ ရယ် ။
အလကားနေရင်းကို ရယ်မိနေတယ်။ ဟို အတိသဉ္ဇာနဲ့ နာဂရတို့ရဲ့သား မောင်ချစ်သူလို့ နာမည်တစ်လုံးထဲ မိသားစုလေးလုပ် မလို့ရေးမိပါတယ်….ဟော ခုမောင်သန်းထွဋ်ဦးဆိုပြီး နာမည်က ရှေသထက်ရှေလာနေပြီး…..
နောက်ပြောဦးမယ်။ ဒီ ဦးဦး ဒကာဗိုက်က လဲ…ဘုန်းကိုကို ဇောက်ကို သဘောတရားတွေပြောတော့…ဘုန်းကြီးဆိုစွပ်စွဲပြန်လိုက်….ခုလို မီးကိစ္စလေးမှာ မျှမျှတတလေး သုံးသပ်ပြတော့…ဘုန်းကြီးတော့ မဟုတ် နိုင်ဘူး။ ဒါလူဆိုပြီးလုပ်လိုက်…..ဦးဗိုက်ရယ်..ကျွန်တော်ပြောတာတွေ ထဲမှာ ၃၁=ဘုံဆိုတာလဲမပါ။ ငရဲဆိုတာလဲ မပြော…နတ်ပြည်ဆိုတာလဲ မသိလို့မပြောပဲနေတာကို ဘယ်နှယ်ဘုန်းကြီးလုပ်လုပ်နေနေတာလဲ။ အနော် ဇောက်ဇောက်က လူ့…အကြောင်းပဲပြောတာပါဗျာ….တရားလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ လူနဲ့ကင်းပြီး စကားကို မပြောတတ်ပါဘူး။ ဒီဒကာပေတို့ အန်တီလတ်တို့ကလဲ ဦးဦးဒကာဗိုက်လိုပဲ ကျွန်တော်ကို ညီညီဇောက်လို့သာ မှတ်လိုက်စမ်းပါဗျာ……ဘုန်းကြီးလုပ်ရမှာများ လန့်လွန်းလို့ပါ။ ကားသမားကစ..ပြောတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးရယ်…ကြက်ဥရယ်…မှန်ရယ်…ဘုန်းကြီးရယ်ဆိုရင် ကာပေါ် ခေါ်တင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ နောက် ချက်ထိုင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကပြောတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာ အစက ဘုန်းကြီးမှန်မသိလို့ ချက်နေတာ…နောက်သိတော့ ပိတ်လိုက်တယ်တဲ့။ ဘုန်းကြီးများ သူရဲကျနေတာပဲ…ကြောက်ကြတာ…မြန်မာပြည်မှာ လူတွေကဒီမိုကရေစီရတော့မှာ ဦးဗိုက်ရ……………………လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်တွေ..ရေးသားခွင့်တွေ….ရကုန်ပြီ……….မရသေးတာဆိုလို့……….
ကျနော်လဲ ဥပေဆီက ဂေါ်လီကြွေး ဆယ်သိန်းရချရာချိဒယ်..မရသေးဘူး..
“”အလကားနေရင်းကို ရယ်မိနေတယ်။ ဟို အတိသဉ္ဇာနဲ့ နာဂရတို့ရဲ့သား မောင်ချစ်သူလို့ နာမည်တစ်လုံးထဲ မိသားစုလေးလုပ် မလို့ရေးမိပါတယ်….ဟော ခုမောင်သန်းထွဋ်ဦးဆိုပြီး နာမည်က ရှေသထက်ရှေလာနေပြီး…..””
“လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ…ဘာခက်တာမှတ်လို့” ဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့ပြောမနေနဲ့ ကိုယ်တော်။
ကိုယ်တော် လဲ မနက်စောစော အခုလို ထပြီး ဆွမ်းချက်ရင် လျှပ်စစ်လေးရရင် ခက်ခက်ခဲခဲ မီးမွေး ပြီး ချက်နေစရာ မလိုဘူးပေါ့။
တရားဓမ္မများကို ဝင်ပြီး ရွှီးချိန်ရသပေါ့။ ;-)
မဟုတ်လား ကိုယ်တော်ရယ်။ :D